रुखो व्यवहार र घरभाडामा मनपरी – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ पुष ३ गते मंगलवार ०७:३९ मा प्रकाशित
घरभाडामा बस्नु रहर होइन बाध्यता हो । घरभाडामा दिनेहरुको मनपरीले भाडामा बस्नेहरु समस्यामा छन् यतिखेर पोखरामा । सानो कोठालाई पनि महङ्गो शुल्क तिरेर बस्नुपर्दा विशेष गरी क्याम्पस पढ्न गाउँबाट सहर छिरेका विद्यार्थी र न्यून आय भएका मजदुर वर्ग मर्कामा छन् ।
सहरमा घर ठड्याएकाहरुको रुखो व्यवहार र महङ्गो घर भाडाका कारण दैनिक गुजारा चलाउन निकै समस्या परेको पोखरा–५ प्रास्र्याङ बस्ने कल्पनाले बताइन् । एकातिर गाउँ छाडेर सहर पस्ने क्रम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सहरी बसाइँ महङ्गीका कारण दिनानुदिन थप कष्टकर बन्दै गएको छ ।
जागिरका लागि जाँदा ५÷७ हजार तलब दिने कुरा आउँछ अनि घरभाडामै जान्छ ४००० जति अनि के खाने ? सानो टिनले छाएको कोठालाई समेत महङ्गो भाडा तिर्नु परेको सिमलचौर बस्ने सागरले गुनासो गरे । एउटा सानो खाट र किचन टेबल मात्र अट्ने कोठा छ तर बत्ती पानी बाहेक नै ३००० तिर्नु परेको उनले सुनाए ।
मनपरी घरभाडाका कारण निकै समस्या छ पोखरा बगर बस्ने महेन्द्र थापाले भने । सबैले मनपरी गरेका नहोलान् तर धैरेले मनपरी भाडा लिइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार बनिसकेको छ यस विषयमा किन ध्यान जान सकेको छैन ? अब स्थानीय सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएर वैज्ञानिक र व्यवहारिक भाडा तोक्न जरुरी भइसकेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।